NAMNI OROMUMMAAF YAADU GALATA QABA! – Welcome to bilisummaa
bilisummaa November 23, 2014	Leave a comment
Namoonni tokko tokko akkaataa itti komatan malee akkaataa itti dinqisiifatan hin beekan.
Oromoo fi Oromummaan maal akka taatee fi qabsoon Oromoo garamirraa garam deemaa jirtii warreen irraa quba hin qabneetu qabsaa’ootaa fi qabsoo Oromoo faalleessaa jira. Nama ifiif if baree eenyummaa ifii beekuutu tan namaa dubbata. Garuu Namni ifiifuu if hin beeyne waan dubbatu hin qabu. Namoonni tokko tokko “Oromoon Maali?” Jattee yoo gaafatte warreen deebii hin qabneetu,afaan qaratee nama dhugaa arrabsa.
Namni Oromummaaf jedhee hadoodu,namni Oromummaaf jedhee falmatu,namni Oromummaaf jedhee qabsaa’u nama mataa isaatiif osoo hin taane,sabasaatiif dhaamotu. Guyyaa tokkollee ta’u namni sabaaf yaadee waan dhimma saba isaa dalage galata guddaa qaba. Garuu nama akkasii sanitti gufuu ta’uun hamilee wal cabsuudha. Wal komachuu,wal arrabsuufi maqaa wal xureessuun,garayyuu nu hin geessu! Yoo walii gallee,wal dhageenyee,wal kabajnee,wal dandeenye,wal jala bobbaane qofa bakka yaadne geenya. San ta’uu baannaan garuu wanni tarru hin jiru. Xumura irratti jecha Dr.Sheek Mohammed Rashaad Abdullee (Rabbi Rahmata Haa Godhuufii) jedhe tokkoonin xumura.
“Manni yoo qaqal’iin qajeelte,yoo dagaleen tolte,yoo utubaan qajeelee tole,manni ni tola. Hoggaa taan ni
jallata. Haa tayuu ogeessi mukni jallate je’ee hin darbu. Muka biyya jiruun dallaya jaaran je’anii. Gama
inni itti jallate san,mogoleetti suuta dhidhiibee if duuba deebisa.Ammas akka bakka dhawameen saniin hin laafanne,muka qajeelfame kana muka
qajeelaa lama jidduu kaayee yookaa dhaabee waliin dagalcha.”
Maaliif wal komanne
maa wal arrabsine?
Maqaa wal xureessuu
maa aadaa godhanne?
Maaliif walin taane
wal jala maan yaane?
Silaa walii gallee
Kan sabasaa jibbee
Kan hojii godhatee
Humaa keessan jiru
Gurra hin kanninaaf
wal jala hiriiraa
yaadaan wal deeggaraa
Nama sabaaf yaadu
waan yaanne arganna.
Tags najiib walaloo
Previous Sadaasa 20,2014 Sagalee Diddaa Gootota Qeerroo,Barattoota Oromoo Yuuniversiitii Wallaggaa
Next OMN: “Ummata khiyyatti kijibuu mannaa aangoo gad lakkisuu naa wayya jedheen OMN irraa gaafatama kiyya gad lakkise”
PRO.Mararaa Guddinaatiin Yaa Saba Bal’aa !! Akkuma beekamu yeroo ammaa kana haala rakkisaa fi yaaddessaa …